Iihotele eBali zifuna ukuxolelwa kumnyhadala we-Eid Indonesia
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Iihotele eBali zifuna ukuxolelwa kumnyhadala we-Eid Indonesia
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseIndonesia eziQhekezayo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Intetho yezoKhenketho • uthutho • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Icandelo lezokhenketho laseBali lisebenza ekuvuleni kwakhona ukhenketho lwamanye amazwe. Ukujonga ukuvalwa okugunyazisiweyo ngumnyhadala we-Eid kuchaswa nguMbutho wehotele waseBali.
The Umbutho wehotele waseBali ucele uRhulumente ukuba akhululwe kwiminyhadala ye-Eid ezayo yokuthintela ulwandle, umhlaba kunye noololiwe.
Ngokuka-BHA ukuvalwa ngokwakho kuya kuba nefuthe elibi kakhulu kuzo zonke iinkalo zoluntu eBali. Amashishini aza kujongana nokuvalwa, intswela-ngqesho iya kunyuka, kwaye iziphumo ezibi zokungena zingenakuphepheka.
I-BHA iyaqhubeka nokuxhasa i-Indonesia kaZwelonke kunye noRhulumente waseKhaya ngemizamo yabo yokuvula ngokuthe ngcembe iBali kukhenketho lwamanye amazwe
Kwileta ethunyelwe kumagosa kaRhulumente woKhenketho eBali kule veki, ebethetha ngenkxalabo yeehotele ezingamalungu ezili-157 kunye neendawo ekuchithelwa kuzo iiholide malunga nefuthe lesibhengezo sikaRhulumente waseIndonesia sokuvala ulwandle, umhlaba, umoya kunye nololiwe ukusuka ngomhla we-6-17 Meyi 2021 Umthendeleko we-Eid.
I-Eid al-Fitr, ekwabizwa ngokuba yi "Umthendeleko Wokwaphula Ukukhawuleza", yiholide yenkolo ebhiyozelwa ngamaSilamsi kwihlabathi liphela ebonisa ukuphela kwenyanga-kude kube-ngokuzila kwelanga eRamadan. Le Eid yenkolo kuphela kosuku kwinyanga yeShawwal apho amaSilamsi angavunyelwanga ukuba azile.
Uninzi lwabemi bePhondo lase-Indonesia iBali ngamaHindu.